एक जना व्यक्तिले चिर्पट प्रहार गरेर श्रीमतीको हत्या गरे
दशैंको दिन पोखरामा एकैपटक १०१ जनामा कोरोना संक्रमण
कोलुमा तोरी पेल्दै
आज नेपालीको महान चाड विजयादशमी, कति बजे छ टीकाको साइत ?
प्रधानमन्त्री ओलीले बडा दशैँको अवसरमा सबैमा गरे यस्तो आग्रह
बैतडी । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले ‘एक प्रहरी एक बिरुवा’ रोप्ने अभियान सञ्चालन गरेको छ । अभियानअन्तर्गत शनिबार ४०० बिरुवा रोपिएको बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक दीपक पातलीले जानकारी दिए । वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित जिल्लामा रहेका ४०० प्रहरीले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थान र खाली रहेका क्षेत्रमा फलफूल तथा जडीबुटीका बिरुवा रोपेका हुन् ।
साप्सुखोलाको बाटोफेदीमा प्रिस्ट्रेस बिम पुल निर्माण शुरु
खोटाङ । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–४ खाल्ले र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–१ याम्खाको सिमानामा पर्ने साप्सुखोलामा मोटरेबल पुल निर्माणको काम शुरु गरिएको छ । दुई स्थानीय तहको बीचमा पर्ने साप्सुखोलाको बाटोफेदीमा प्रिस्ट्रेस बिम पुल निर्माणको काम शुरु गरिएको हो ।
अपार्टमेन्ट भवनको पर्खाल भत्किदाँ १५ जना व्यक्तिको मृत्यु
एजेन्सी । पश्चिम भारतमा रहेको एक अपार्टमेन्ट भवनको पर्खाल भत्किदाँ कम्तीमा १५ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । यस दुर्घटनामा चार बालबालिकासहित १५ व्यक्तिको मृत्यु भएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
काठमाडाैँ । उपत्यकाका नदीलगायत चक्रपथ सफाइ अभियान निरन्तर जारी रही स्वच्छ राजधानी बनाउन सहयोग पुगेपनि हप्ता दिनदेखि फोहर नउठ्दा दुर्गन्धित बनेको छ ।
भ्यान्टे कामी ३० वर्षपछि पक्राउ
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत ३० वर्षपछि फरार अभियुक्त भ्यान्टे कामीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरी निरीक्षक वसन्त पाण्डेको नेतृत्वमा सादा पोशाकमा गएको प्रहरी टोलीले दूधपोखरी गाउँपालिका–४ घर भएका उनलाई सोही क्षेत्रबाट शुक्रबार साँझ प्रक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
कारागारमा क्षमताभन्दा पन्ध्र गुणा बढी कैदीबन्दी
सिन्धुपाल्चोक । ठाउँ अभावले सिन्धुपाल्चोकको कारागारमा क्षमता भन्दा पन्ध्र गुणा कैदीबन्दी राखिएको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले नवनिर्मित पुरुष कारागार भवन भत्केपछि सात महिला बन्दीका लागि निर्माण गरिएको कारागार भवनमा हाल १०५ जना कैदीबन्दी राखिएको कारागार कार्यालयका प्रमुख विश्वश्वर रेग्मीले बताए ।
मादीमा ताल बनाउन अध्ययन गरिने
तनहुँको दमौलीस्थित मादी नदीमा बाँध बाँधेर कृत्रिम ताल निर्माणका लागि व्यास नगरपालिकाले अध्ययन गर्ने भएको छ । केही महीना अगाडि काठमाडौँमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा पर्यटन पूर्वाधार क्षेत्र अन्तर्गत छनोट भएको ताल निर्माणका लागि नगरपालिकाले अध्ययन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।
एजेन्सी । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरका वैज्ञानिकले निजी क्षेत्रमा पालिएका भैँसीलाई बेमौसममा गर्भाधान गराउनका लागि काम शुरु गरेका छन् । रामपुरमा रहेको आफ्नै फारममा यसमा सफलता मिलेपछि भरतपुर र माडीका कृषकले पालेका भैसीमा अनुसन्धान थालिएको हो ।
दाङ । दाङमा जीप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । आज रगैँचाबाट तुलसीपुर आउँदै गरेको जीप दङ्गीशरण–७ श्रीगाउँ नजिक दुर्घटना हुँदा जीप चालक दङ्गीशरण–७ रजतगाउँका डिल्लीबहादुर ओलीको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ ।
यस्तो पनि ! जनप्रतिनिधि यार्सा टिप्न गएपछि बजेट आएन
डोल्पा । डोल्पाका आठ स्थानीय तहमध्ये तीन वटा स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जगदुल्ला, मुड्केचुला र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका बाहेक अन्य पाँच वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न गएका कारण बजेट सार्वजानिक हुन सकेको छैन् ।